Uthotho lwe-WA WF oluthe tye ipleyiti yesikhenkcisi, iTshayina WA WF uthotho oluthe tyaba lwesikhenkcisi sepleyiti Abavelisi, ababoneleli, umzi-mveliso-iSquare Technology Group Co., Ltd.
Izikhenkcezisi ezinjalo zingasetyenziselwa ukukhenkceza iimveliso ezahlukeneyo kwiitreyi, iipani kunye neebhokisi, ezifanelekileyo ukutya kwaselwandle, inyama encinci epakishwe kunye nokunye ukutya kwiibhloko. Amacwecwe angaphakathi abekwe ngokuthe tye ukuze iimveliso kwiitreyi okanye iipakethi zibekwe kumacwecwe okubanda okungcono.
● Yenziwe ngeAluminiyam enganyangekiyo emanzini, kwinqanaba lokutya. Iplate ye-aluminium engqingqwa engama-25mm inika amandla aphezulu, ukumelana nokubola okuphezulu kunye nokuqhutywa kobushushu. Le ipleyiti ngokuzenzekelayo welding kwaye ubuncinane deformation.
● Indawo ebiyelweyo igqunyiwe ngesiqwenga sePolyurethane esenza amagwebu ukuqinisekisa isakhiwo esomeleleyo kunye nokunciphisa ilahleko ebandayo ngokususa amalungu.
●Indawo ebiyelweyo yesikwere sefriji yintsimbi engenasici. Inokugcina imeko engqongileyo yolwandle kwaye kulula ukuyicoca.
●I-PTFE Idityaniswe ngaphandle kwesibophelelo seHose Joint, iflanged okanye umsonto unxibelelwano. Ithumbu ligutyungelwe ngentsimbi yesinyithi engama-304L.
Size Ubungakanani obusebenzayo betafile yonyuko: 2020 × 1252 (mm)
Indawo ebandayo: 25.2m2
Zing Umkhenkce umthamo: 1500kg / ngeenxa zonke (Ngokusekwe kwi-15kg / ibhloko, ubungakanani bebhloko: 600mm × 400mm × 80mm)
Inombolo yePlate: 10; Maleko ubushushu: 10
Ukucoca ipleyiti: 55mm - 108mm
Ukunikezelwa kolwelo: Impompo
◆ Umthwalo omkhulu wefriji: 46kw (i-evaporative temp: -35 ℃, itempe ye-condens: + 35 ℃)
Ixesha lokutya: + 20 ℃ Itempe ekhutshiwe.: 18-XNUMX
Umgca wolwelo: φ38 Umgca wegesi: -76
Isikhululo seHydraulic: (1) Amandla ompompo weoyile: 1.5kw (380V / 50Hz)
(2) Cwangcisa umatshini wokushicilela. Impompo oyile: 5MPa
(3) Ukuhamba kwempompo yeoyile: 10L / min
(4) ioyile hydraulic: # 46; 68kg (wena)
Power Amandla afakiweyo: 1.5kw
Ubukhulu obuqhelekileyo: 3460mm (L) × 1900mm (W) × 2990mm (H)
◆ Ubunzima: 3600kg